Alaab -qeybiyeyaasha Nidaamka Hagaha iyo Warshadda - Soo -saareyaasha Nidaamka Hagaha Shiinaha
Qaybaha Tareenka ee Hagaha Wiishka ee Kala Duwan
Jidadka tareenka hagaha wiishka waxaa loo adeegsadaa taageeridda iyo hagaajinta tareenka hagaha, waxaana lagu rakibay darbiga dariiqa ama dogobka. Waxay hagaajisaa booska meelaynta tareenka hagaha waxayna ka qaadaa falal kala duwan tareenka hagaha. Waxaa loo baahan yahay in tareen kasta oo hagaha lagu taageero ugu yaraan laba qaanso ee tareenka hagaha. Sababtoo ah wiishashka qaar ayaa ku xaddidan dhererka dabaqa sare, kaliya hal qaanso hagaha tareenka ayaa loo baahan yahay haddii dhererka tareenka hagaha uu ka yar yahay 800mm.
Hagaha Qaadista Tareenka wiishka
Tareenka hagaha wiishka ayaa ah waddo ammaan ah oo wiishku u maro kor iyo hoos ee hoistway, isaga oo hubinaya in baabuurka iyo miisaanka miisaankiisu kor iyo hoos ugu socdo.
Kabaha Tilmaamaha ee Go'an ee Wiishashka Xamuulka THY-GS-02
Kabaha hagaha birta ah ee THY-GS-02 waxay ku habboon yihiin dhinaca baabuurka wiishka xamuulka ee 2 tan ah, xawaaraha lagu qiimeeyay wuxuu ka yar yahay ama la siman yahay 1.0m/s, iyo ballaca hagaha hagaha u dhigma waa 10mm iyo 16mm. Kabaha hagaha wuxuu ka kooban yahay madaxa kabaha hagaha, jirka kabaha hagaha, iyo kursiga kabaha hagaha.
Kabaha Tusaha Sisinta ee Wiishka Rakaabka THY-GS-028
THY-GS-028 waxay ku habboon tahay tareenka hagaha wiishka oo ballaciisu yahay 16mm. Kabaha hagaha wuxuu ka kooban yahay madaxa kabaha hagaha, jirka kabaha hagaha, kursiga kabaha hagaha, gu'ga riixa, haysta koobka saliidda iyo qaybaha kale. Wixii kabaha hagaha sabeynaya ee nooca-gu'ga ah ee dul sabeynaya hal-dhinac, waxay ka ciyaari kartaa saamayn wax-ku-ool ah jihada tooska u ah dusha dhammaadka tareenka hagaha, laakiin weli waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya isaga iyo dusha shaqada ee tareenka hagaha, taas oo ka dhigaysa dusha shaqada ee tareenka hagaha.
Kabaha Tusaha Sisinta waxaa loo adeegsadaa Wiishashka Rakaabka caadiga ah THY-GS-029
THY-GS-029 Mitsubishi kabaha hagaha lagu riixo waxaa lagu rakibay kursiga badbaadada badbaadada ee ku yaal baalka sare ee gaariga iyo salka gaariga. Guud ahaan, waxaa jira mid kasta 4, taas oo qayb ka ah in la hubiyo in baabuurku kor iyo hoos ugu socdo tareenka hagaha. Inta badan waxaa loo isticmaalaa wiishashka oo xawaaraha lagu qiimeeyay uu ka hooseeyo 1.75m/s. Kabaha hagahani waxay inta badan ka kooban yihiin dahaarka kabaha, kursiga kabaha, haystaha koobka saliidda, guga riixa iyo qaybaha caagga ah.
Kabaha Tusaha Sisinta waxaa loo Isticmaalaa Wiishka Rakaabka Rakaabka Dhexdhexaad iyo Xawaare Sare THY-GS-310F
Kabaha tusaha xawaaraha sare ee THY-GS-310F waxay hagaajinayaan gaariga tareenka hagaha si uu gaarigu kor iyo hoos ugu socdo. Qeybta sare ee kabaha hagaha waxaa lagu qalabeeyaa koob saliid ah si loo yareeyo khilaafka u dhexeeya dahaarka kabaha iyo tareenka hagaha.
Kabaha Tusaha Sisinta ee Wiishka Rakaabka THY-GS-310G
Kabaha hagaha ee THY-GS-310G waa aaladda hagaha oo si toos ah ugu dhex-dhici karta tareenka hagaha wiishka iyo baabuurka ama miisaanka culus. Waxay xasilin kartaa baabuurka ama miisaanka culus ee tareenka hagaha si ay kor iyo hoos ugu simbiriirixato si looga hortago in baabuurka ama miisaanka culus uu noqdo Skew ama lulid inta lagu jiro hawlgalka.
Kabaha Tusaha Dheeraadka ah ee Tareenka Hoolka bannaan ee THY-GS-847
Kabaha hagaha miisaanka culus ee THY-GS-847 waa kabaha hagaha tareenka godka leh ee W-qaabeeya, kaas oo hubiya in aaladda miisaanka culus ay si toos ah ugu socoto tareenka tilmaamaha miisaanka culus. Qeyb kasta waxaa lagu qalabeeyay afar qaybood oo ah kabaha hagaha miisaanka culus, kuwaas oo siday u kala horreeyaan loogu rakibay qaybta hoose iyo sare ee dogobka miisaanka culus.
Kabaha Hagaha Rullaluudda ee Wiishashka Xawaaraha Sare THY-GS-GL22
Kabaha tusmada duudduuban ee THY-GS-GL22 waxaa kaloo loo yaqaan kabaha hagaha duubka. Sababtoo ah adeegsiga xiriirinta duubista, caag adag ama caag ka samaysan ayaa lagu rakibay wareegga dibedda ee rullaluubka, iyo il qoyan ayaa inta badan lagu rakibaa inta u dhexeysa giraanta hagaha iyo qaabka kabaha hagaha, taas oo yareyn karta tilmaanta kabaha iyo tareenka hagaha, badbaadinta awoodda, yaree gariirka iyo buuqa, oo loo isticmaalo wiishashka xawaaraha sare 2m/s-5m/s.
Kabaha Hagaha Rullaluudda ee Wiishka Guriga THY-GS-H29
Kabaha hagaha wiishka ee THY-GS-H29 villa wuxuu ka kooban yahay go'an go'an, baloog naylon ah iyo qaybta roogga; xannibaadda nylon waxay ku xiran tahay jir go'an oo ay ku dhejinayaan; bareelaha rullaluistemadka wuxuu ku xiran yahay jir go'an iyada oo loo marayo usheeda dhexe; waxaa la diyaariyay bareelaha roogga Waxaa jira laba rollers, labada rollers ayaa si gooni ah loogu diyaariyey labada dhinac ee usheeda dhexe, iyo meelaha giraangiraha ee labada rollers waxay ka soo horjeedaan baloogga nylon.
Kabaha Tusaha Sisinta ee Axadaha wiishka THY-GS-L10
Kabaha hagaha ee THY-GS-L10 waa kabaha hagaha miisaanka culus ee wiishka, kaas oo sidoo kale loo isticmaali karo wiish kala duwan. Waxaa jira 4 kabo hagaha miisaanka culus ah, laba kabo oo hagaha sare iyo hoose ah, kuwaas oo ku dheggan jidka oo kaalin ka qaata hagaajinta miisaanka miisaanka yar.
Barroosinka Barroosinka Si Loo Hagaajiyo Qaybta
Muraayadaha fidinta wiishka waxay u qaybsan yihiin boolal fidinta daboolka iyo boorarka ballaarinta dayactirka baabuurta, kuwaas oo guud ahaan ka kooban fur, tuubad ballaarinta, dhaqe siman, dhaqe guga, iyo lowska laba -geesoodka ah. Mabda'a qumman ee fur-fidinta: isticmaal jiirada qaab-dhumuc leh si kor loogu qaado fidinta si loo abuuro xoog is-qabqabsi si loo gaaro saamaynta go'an. Guud ahaan marka la hadlayo, ka dib marka ballaca ballaarinta lagu riixo daloolka dhulka ama derbiga, isticmaal maroojin si aad ugu adkeyso lowska xagga saacadda ballaarinta.